Brackish na mmiri ọgwụ usoro (HMJBKRO nsonso) - China Xi'an Homey Technology
Brackish na mmiri ọgwụ usoro (HMJBKRO usoro)
elu nnu jụrụ brackish reverse nwayọọ nwayọọ amịkọrọ usoro 3000GPD a unit na-eji na-emeso brackish mmiri na TDS nke 7000ppm na mgbake ọnụego upto 70%. Isi conponents nke usoro ndị multi media iyo, rụọ ọrụ carbon iyo na brackish mmiri desalination unit.With elu nnu ojuju na ala ike sonsume, ọ dịkwa mfe echichi na mmezi. Ngwaahịa bụ OA gbaara ezi mma. Brief Okwu Mmalite: 1, Iji Dow FILMETEC imewe software gbakọọ na simulate, ...
Pịnye: brackish na mmiri ọgwụ usoro
Raw mmiri TDS: n'okpuru 15000ppm
Mmepụta mmiri TDS: erughị 600ppm
Ụba: Carbon ígwè
elu nnu jụrụ brackish reverse nwayọọ nwayọọ amịkọrọ usoro 3000GPD
Nke a unit na-eji na-emeso brackish mmiri na TDS nke 7000ppm na mgbake ọnụego upto 70%. Isi conponents nke usoro ndị multi media iyo, rụọ ọrụ carbon iyo na brackish mmiri desalination unit.With elu nnu ojuju na ala ike sonsume, ọ dịkwa mfe echichi na mmezi. Ngwaahịa bụ OA gbaara ezi mma.
Brief Okwu Mmalite:
1, Jiri Dow FILMETEC imewe software gbakọọ na simulate, na-enye ozizi guidline maka imewe
2, imewe dị iche iche na usoro dị ka na-eri nri mmiri àgwà na chọrọ ikike, ndị B2K usoro na ọdabara na raw mmiri na nnu ọdịnaya 5000ppm-15000ppm. Ọ bụrụ na nnu ọdịnaya bụ n'elu 15000ppm PLS họrọ SW usoro maka mmiri nke oké osimiri
3, Unique ọhụrụ mmiri akpaka nnọchi ngwaọrụ dochie uche na akpụkpọ ahụ na-adị ọhụrụ mmiri mgbe usoro na-akwụsị iji belata akpụkpọ ahụ mmetọ, ya mere ogologo ọrụ ndụ na ala na-eri.
4, Carbon ígwè ntekwasa na igwe anaghị agba nchara etiti maka oke, na-akpụ akpụ ụkwụ nwere ike arụnyere maka dị iche iche echichi ọnọdụ
5, igwe anaghị agba nchara na SCH80UPVC pipelines na elu àgwà iji hụ dịghị leakage na ala corrosion n'okpuru elu nsogbu
Ike ọkọnọ bụ 220 / 380V, 50Hz / 60Hz maka nhọrọ. Eku bụ carbon nchara na igwe anaghị agba nchara nhọrọ.
HMJBK9RO seires- Iji emeso raw mmiri na TDS erughị 9000ppm
HMJBK15RO seires- Iji emeso raw mmiri na TDS erughị 15000ppm
1.DOW akpụkpọ ahụ 2.FRP mgbali arịa 3.sediment nyo 4.SS centrifugal elu presure mgbapụta
5.cleaning usoro 6. ọhụrụ mmiri nnọchi usoro 7. carbon ígwè ntekwasa etiti
8.PLC akpaka akara
1.multi-media nyo 2.activated carbon nyo 3.stainless ígwè etiti
-arụ ọrụ usoro
Previous: Standard RO na mmiri ọgwụ usoro (HMJRO-6000LPH)
Brackish Water Ọgwụgwọ